Taorian’ny fipoahana fiarabe iray nahafaty olona, resahana ao Pero ny fiarovana an-dalambe sy ny fepetra momba ny asa · Global Voices teny Malagasy
Fihariana tsy manara-drafitra sy manampahefana tsy mihontsona, helohin'ireo Peroviàna.
Nandika (fr) i Stéphane B
Voadika ny 05 Febroary 2020 2:56 GMT
Lelafo sy rindrin-tsetroka mainty tao Villa el Salvador. Pikantsary avy aminà lahatsary Youtube an'ny RPP Noticias.
Ny Alakamisy 23 Janoary 2020, taloha kelin'ny tamin'ny 7 ora maraina, nisy fipoahana iray nahery vaika nampivarahontsana ireo mponina tao Villa El Salvador (VES), tanàna iray any atsimon'i Lima, renivohitra peroviàna. Fiarabe iray nitatitra entona navadika ho ranony (GPL) no niteraka firehetana nahatsiravina noho ny fitetevan'ny solika. Maro no maty, ampolony maro no naratra ary trano efa ho 20 no simba. Miady aman'aina ny ankamaroan'ireo naratra ary betsaka ny fahamaizana hita amin'ny faritra maro amin'ny vatany.
Asehon'ity lahatsary ity ny niantombohan'ny firehetana. Asehony ihany koa ny tsy firaharahian'ireo manampahefana peroviàna :
Hitanareo ve ny zava-mitranga tao Villa El Salvador ? Firehetana mahatsiravina nateraky ny fipoahan'ny fiarabe iray nitatitra entona. Marobe ny ankizy naratra ary mila mpanome rà. Mampalahelo ny mahita hoe tsy misy manampahefàna miresaka momba izany.
Araka ny fanazavàn'ny injeniera Galo Flores Quino [es], teo aminà fidinana iray no nitranga ny fipoahan'ilay fiarabe, toerana ifanapahanà làlana roa. « Raha ny mibaribary, tsy araka ny tokony ho izy ny fomba nanaovana [io fidinana io] », hoy izy nanazava.
Singa telo no notanisain'ilay manampahaizana manokana ho niteraka an'izao endri-javatra izao : ny tsy fetezan'ny asa fanamboarana an'ilay làlana manapaka; ny tsy fisian'ny takelaka fampilazàna mampitandrina ireo mpamily ny fisian'ilay fidinana tampoka eo amin'ilay faritra, ary ny fandehanana mafy loatra nataon'ilay fiarabe mpitatitra solika.
Io fidinana io no mety niteraka ny fiparitahan'ny entona avy amin'ilay fiarabe mpitatitra solika izay nipoaka nony avy eo. Iray no maty voaisa ary 30 no naratra ao Villa El Salvador.
Tamin'ny voalohany dia noheverina hoe maty tao anatin'ilay fipoahana ny mpamily. Avy eo, fantatra fa [es] velona izy ary niezaka ny nifehy ny fiparitahan'ilay entona. Avy eo izy nandeha nitolo-batana tany amin'ny manampahefana [es], ora vitsy taty aoriana.
Efa hariva be tamin'io andro io, namoaka vaovao momba ilay mpamily ny mpanao gazety Juan Pablo León :
Efa in-83 nanao tsinontsinona ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ny mpamily ilay fiarabe nirehitra tao Villa El Salvador.
Mbola zavadoza noho izany aza : efa in-5 nahazo sazy ara-bola izy noho ny nitondràny entana mampididoza, na dia eo aza ny fepetra fiantohana aina.
Etsy andaniny, efa nahazo sazy ara-bola ihany koa izy noho ny herisetra nataony tamin'ireo mpisafo (inspektera). Fa tsy nahasakana ilay orinasa tsy handray azy hiasa izany, toy ny hoe tsy nisy na inona na inona.
Somary nilefidefitra ihany nanoloana ilay mpamily, lehilahy lehibe 72 taona, ireo sasany mpampiasa aterineto :
Efa zokiolona ny mpamily ilay fiarabe. Tsy maintsy nikarama ihany anefa izy. Tsy rariny ny manome sary azy ho toy ny olona efa voaheloka. Anjaran'ireo manampahefana ny mizaka ny andraikitra momba ilay loza tao VES.
Loza iray azo nosorohana
Arakaraky ny andehanan'ny ora, tsy nitsahatra nitombo koa ny hatezeran'ny olona, nanoloana ilay loza nahatsiravina izay tokony ho azo nosorohana [es], raha toa ilay orinasa ka nanaraka tsara ny fitsipika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, vitsy ny vintana mety hisehoan'ny zavadoza tahaka izao raha ao anatin'ny tsenan'ny asa manara-drafitra.
Araka ireo tondro sasantsasany, mety manome hatramin'ny 60% amin'ny famokarana ao Pero ny toekarena ivelan'ny rafitra. Norman Loayza, mpahay toekarena miasa ho an'ny Banky Iraisampirenena, dia nanoratra tatitra iray momba io resaka io ho an'ny banky foiben'ny tahiry ao Pero [es] :
Raha jerena ny sandan'ireny tondro ireny, avy amin'ny toekarena ivelan'ny rafitra ny 60% amin'ny famokarana ao Pero ary ny 40% avy amin'ireo mpiasa tena any anatin'ireo orinasa madinika tsy manao fanambaràna. Fanampin'izay, ny 20% monja amin'ny hery mamokatra ao an-toerana no misoratra aminà rafitra ara-dalàna momba ny fisotroandronono, na dia ampidirina ao aza ireo mpiasa any amin'ireo orinasa vaventy.
Izany no antony nahatonga ireo mpandalina sasany tsy hamela handalo fotsiny [es] ka tsy hiresaka io zavadoza io, tamin'ny fametrahana ny teny hoe “loza” ho anaty farango sosona. Iray tamin'izy ireny i Javier Torres Seoane, ilay antrôpôlôgy (manampahaizana mandinika momba ny olombelona). Notanisainy ireo loza hafa izay azo nosorohana:
Ao amin'ny firenena iray misy toekarena tsy manara-drafitra dia ompa iray atao amin'ny fahaiza-mandinika ananan'ny olombelona ny filazàna hoe “loza” ny zavatra iray nateraky ny tsy fanarahana ireo fenitra fiarovana no sady fomba iray hitazonana ny zavamisy ho amin'ny toerana efa misy azy rahateo. Azo raisina io ho an'ilay firehetana fiarabe mpitatitra solika nitatitra GPL, ka hatramin'ny nahafaty ireo mpiasa roa tao amin'ny McDonald's, na ireo an'arivony maro maty eny amin'ny arabentsika.
Tamin'ny Desambra 2019, tanora roa niasa tao amin'ny McDonald tao Lima no matin'ny herinaratra noho ny haratsin'ny fitaovana mandeha herinaratra tao amin'ny toerana niasàn'izy ireo.
Marobe ireo mpampiasa aterineto no nalahelo nahita ny tsy fihontsonan'ireo orinasa tsy mankina hafa nanoloana ilay zavadoza :
Aiza ry zareo orinasa goavana? Ireo toerana raitra fisakafoanana ? Ireo sefo ? Aiza ireo toerampivarotana goavana ? Inona no andrasan-dry zareo tsy hanampiany ireo niharan-boina tao VES ? Fantaro fa ireo olona fatra-mpanetry tena no olona tia manampy. Ilaina ny fanampian'ny tsirairay. Zavadoza nasiônaly no atrehantsika izao!
Fiaraha-mientana sy firaisankina hamonjena ireo niharan-doza
Nanao antso fangatahana rà tany amin'ireo hôptaly marobe ao Lima ny manampahefana. Marobe ireo olona namaly avy hatrany an'io fangatahana io. Brezila sy Etazonia kosa nanome selan'olombelona mirefy 48 000 santimetatra ho an'ireo tratry ny fahamaizana. Niforona tao Lima ny filaharana lavabe. Ireo olona vonona hanome rà maimaimpoana izy ireny:
#EsSaludInforma : ? Henoy! Mba hahafahantsika manampy ireo olona nidonan'ilay fipoahana fiarabe mpitatitra solika tao Villa El Salvador, afaka manatona ireo hôpitaly Edgardo Rebagliati sy Guillermo Almenara ianao raha hanome rà, .
Ireto avy no fepetra : ⬇ pic.twitter.com/IuNlBaqC9n
Manolotra fisaorana izahay ho an'ireo nirotsaka an-tsitrapo nanaome rà ary naneho firaisankina noho ny loza tao Villa El Salvador. 39 sahady ireo mpanome an-tsitrapo efa noraisinay !
Andro telo nialoha ireo fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fotoana, natao ny Alahady 26 Janoary 2020 no nitranga ity loza mahatsiravina ity. Fifidianana nambaran'ny filoha Martín Vizcarra, taorian'ny nandravàna ny antenimiera nambara tamin'ny 30 Septambra 2019. Tao anaty tsy firaharahiana tanteraka no nanatontosan'ny vahoaka ilay fifidianana.